China Conical ejima ịghasa extruder emepụta na suppliers | FAYGO
SJSZ usoro conical ejima ịghasa extruder tumadi ekewet nke gbọmgbọm ịghasa, gia nnyefe usoro, quantitative nri, agụụ iyuzucha, kpo oku, obi jụrụ na eletriki akara mmiri Etc. The conical ejima ịghasa extruder adabara maka amị PVC ngwaahịa si mbuaha ntụ ntụ.
Ọ bụ ngwa pụrụ iche maka PVC ntụ ntụ ma ọ bụ WPC ntụ ntụ extrusion. Ọ nwere uru nke ezi onyinye, nnukwu mmepụta, arụmọrụ na-agba ọsọ, ndụ ogologo ndụ. Site na nkedo dị iche iche na akụrụngwa dị ala, ọ nwere ike ịwepụta ọkpọkọ PVC, uko ụlọ PVC, profaịlụ windo PVC, mpempe akwụkwọ PVC, WPC decking, granules PVC na ihe ndị ọzọ.
Dị iche iche nke kposara, abụọ ịghasa extruder nwere ihe abụọ kposara, sigle ịghasa extruder naanị nwere otu ịghasa, Ha na-eji maka dị iche iche ihe, abụọ ịghasa extruder-ejikarị maka ike PVC, otu ịghasa eji maka eyi / Pee. Ugboro abụọ ịghasa extruder nwere ike ịmepụta PVC ọkpọkọ, profaịlụ na granulu PVC. Na otu extruder nwere ike ịmepụta PP / Pee ọkpọkọ na nsogbu dị iche iche.
Nkọwapụta Ngwaahịa zuru ezu
Vkwanyere Conical Ejima ịghasa Extruder
250-380kg / awa
.Dị. SJSZ45 / 90 SJSZ51 / 105 SJSZ55 / 110 SJSZ65 / 132 SJSZ80 / 156 SJSZ92 / 188
Nzipu ike (kw) 15 Ogbe 18.5 22 37 55 110
Rewghasa n'obosara (mm) Φ45 / Φ90 Φ51 / Φ105 Φ55 / Φ110 Φ65 / Φ132 Φ80 / Φ156 Φ92 / Φ188
Rewghasa ibu 2 2 2 2 2 2
Ọsọ ntụgharị (r / min) 45 40 38 38 37 36
Rewgha Mgbu Tor 3148 6000 7000 10000 14000 32000
Extrusion ikike (n'arọ / h) 70 100 150 250 400 750
Ogologo nke etiti (mm) 1000 1000 1000 1000 1100 1200
x2000 x2100 x2200 x2450 x 2460 Ogbolu 2500
Nke gara aga: Single Wall corrugated Pipe Ime Machine
Osote: Single ịghasa Plastic Extruder Machine
FG usoro PET karama ịfụ igwe na-ejupụta ọdịiche dị n'ọhịa nke igwe na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Ugbu a, China linear single-ebu ọsọ ka na-anọrọ gburugburu 1200BPH, ebe mba max ọsọ otu-ebu ọsọ ruru 1800BPH. Igwe na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-adabere mbubata. N'ihi ọnọdụ a, Faygo Union Machinery mepụtara China mbụ nnukwu ọsọ linear ịfụ igwe: FG usoro karama ịfụ igwe, onye otu-ebu ọsọ nwere ike iru 1800 ~ 2000BPH. FG usoro karama ịfụ igwe na-agụnye ụdị atọ ugbu a: FG4 (4-cavity), FG6 (6-cavity), FG8 (8-cavity), na oke ọsọ nwere ike ịbụ 13000BPH. Ọ mepụtara kpamkpam onwe ya, nwere ikike nke ikike ọgụgụ isi anyị, ma nweta ihe karịrị 8 patenti mba.
Nkpuchi Ime igwe
Ngwaahịa ： Flat Ear Band Type Mask
Ike ： 60-80Pcs / Min
Ọnọdụ Gburugburu ： Okpomọkụ: 10-40 ℃,
Mmiri: Enweghị condensate
Voltaji ： 380V ， 50 / 60HZ
Igwe Na-ejuputa Mmanụ
Igwe a bụ igwe 2-in-1 monobloc na-ejuputa igwe. ọ nabatara ụdị ndochi piston, ọ nwere ike ịdị maka ụdị mmanụ oriri ọ bụla, mmanụ oliv, mmanụ sunflower, mmanụ oyibo, ketchup, mkpụrụ osisi na akwukwo nri (ma ọ bụ na-enweghị mpempe siri ike), granule na-a drinkụ ihe ọ volụ andụ na ntinye. enweghị karama enweghị njuputa na ntinye, Usoro njikwa PLC, ọrụ dị mfe.
Single Wall corrugated Pipe Ime Machine
Nke a akara na-bụ-eji na-emepụta dị iche iche otu mgbidi corrugated ọkpọkọ na dayameta si 6mm ~ 200mm. Ọ nwere ike na-emetụta ịkwanyere, eyi, Pee, ịkwanyere, PA, Eva ihe. The zuru akara na-agụnye: Loader, Single ịghasa extruder, anwụ, corrugated akpụ igwe, coiler. Maka PVC uzuzu ihe onwunwe, anyị ga-atụ aro conic ejima ịghasa extruder maka mmepụta.
Nke a akara ịmụta ume oru oma otu ịghasa extruder; na-akpụ igwe nwere Kwadobe na-agba ọsọ modul na ndebiri na-aghọta magburu onwe jụrụ nke ngwaahịa, nke ana achi achi elu-ọsọ ịkpụzi, ọbụna corrugation, ezigbo n'ime na elu anwụrụ mgbidi. Isi ọkụ eletrik nke akara a na-eme ka ụwa a ma ama, dị ka Siemens, ABB, Omron / RKC, Schneider wdg.
.The mma ngwá ọrụ nụchara anụcha na m, ported pụrụ iche kwa-ígwè, nwechapụ n'etiti mma ngwaọrụ bụ kemeghi, mgbe ọ na-aghọta masịrị site na iji, ọ nwere ike dismounted ugboro ugboro, ọ bụ inogide.
• Jiri igwe kposara dị elu kpuchie akwụkwọ mma na oche mma, nwee ikike dị ike.
• All mgbidi nke ndinuak ụlọ na-emeso site ụda-àmà, ya mere inwe eatra-ala mkpọtụ
• A ego-ụdị e mere, na bonka, isi ahu, Sieve nwere ike dismounted maka nhicha mfe, heavey amị na ájá nchebe ngwaọrụ.